अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, संसद् निकम्मा भयो : डा. सुरेन्द्र भण्डारी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, संसद् निकम्मा भयो : डा. सुरेन्द्र भण्डारी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २३ असार । बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनलेमात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले संसद् त निकम्मा भएको दाबी गरे । उनले अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि बताए । उनले भने,‘यदि अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भने मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ जान्छ । झनै समस्या थपिन्छ ।’ उनले संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बरु राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको पनि जिकिर गरे ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताए । उनले धारा ७६ को १ को प्रधानमन्त्री २ अनुसार पनि बन्नसक्छ, २ को प्रधानमन्त्री ३ अन्तर्गत भएकोले ३ बाट ५ अन्तर्गत हुन नसक्ने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए मुलुक निर्वाचनमा जाने बताए । उनले आफूले पनि अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्रै गर्नसक्ने बताउँदै आएको सुनाए ।
उनले भने,‘अहिलेको समस्याको समाधान यो संसद्ले गर्न सक्दैन् । मुलुकमा यत्रा ठूलो भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन्, तर संसद्ले अहिलेसम्म यसबारेमा ठोस काम गरेन । यो त निकम्मा भएको छ ।’ उनले निर्दलीय रुपमा सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवाको माग दाबीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलको हैसियतमा छ, अनि माधव नेपाल र उपेन्द्रजीहरुको स्वतन्त्रको हैसियतमा छ । हेर्नुहोस, संसदीय अभ्यासमा दलका सांसद दलप्रति ईमानदार हुनुपर्छ ।’
उनले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले यतिवेला अदालत आँफै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको सुनाए । राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रपतिले साइतमै लगाइन् टीका
काठमाडौं, २९ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साइत पारेर टीका लगाएकी छिन् । उनले १०